We Fight We Win. -- " More than Media ": မိုးသီးဇွန် (သို့) တောထဲက ဘလူးစ်
ငယ်စဉ်ကျောင်းသားဘ၀ကတည်းက လက်ဝဲစာပေတွေနဲ့ ကြီးပြင်းလာခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်။
သမိုင်းတစ်ကွေ့ရဲ့ အရေးတော်ပုံကြီးမှာ ပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ရင်း အနှစ် ၂၀ကျော်မှ ဇာတိမြေကို ပြန်ရောက်ပြီး အားအင်အသစ်တွေနဲ့ နိုင်ငံသစ်ကြီးတစ်ခု တည်ဆောက်ချင်နေတဲ့သူ။
အိုင်ဒီရော်လော်ဂျီတိုက်ပွဲထဲကနေ တော်လှန်ရေးသမားဖြစ်လာခဲ့တဲ့ သူ။
သွေးမုန်တိုင်းတွေကြား၊ တိုက်ခိုက်မှုတွေကြားမှာ ထနောင်းပင်တွေလို လေပူ၊ နေပူအောက်မှာ မားမားကြီးရပ်ရင်း နိုင်ငံရေးအတွက် စိတ်ဆုံးဖြတ်ထားသူတစ်ယောက်ရဲ့ ဖျတ်ခနဲ ရုပ်ပုံကားချပ်။
ကမာရွတ်မီဒီယာက အောက်တိုဘာ ဒုတိယပတ်ထဲမှာ ထုတ်လွှင့်မယ့် "မိုးသီးဇွန် (သို့) တောထဲက Blues"
Dr Zaw Min,Born in feb1960 ,Mahlaing.Became doctor and studied communist books since 1997.1984,got contact U.G communist Tin Myint and went to communist party main office,Pan Sa
n.1987,he becamealeader cell.
Who really create the 8888?
ဗကပသည် သူတို့ဖြစ်ချင်သည်များကို တိုက်ရိုက် အမည်မခံဘဲ ငယ်ရွယ်ကြွတက်ပြီး တိုင်းပြည် အတွက်ဆိုလျှင် အသက်ပင် စွံ့ ရဲသော်လည်း နိုင်ငံရေး အတွေ့အကြုံ နုနယ် သေးသည့် ကျောင်းသားထု တွင်း သို့ထိုးဖေါက်ပြီး ၀ါဒရေးရာများနှင့် မစည်းရုံးဘဲ ဖြစ်စေချင် သည်များကို ကျောင်းသားသမဂ္ဂ အမည်နှင့် ကြေငြာချက်များ ထုတ်ခဲ့သည်။
သီအိုရီအရ (၈၈၈၈)ရှစ်လေးလုံး ပြည်သူ့အရေးတော်ပုံကို ကျောင်းသားအင်အားစုက စတယ် မှန်ပါတယ်၊ ကျောင်းသားဆိုတဲ့ သဘာဝအတိုင်း တက်ကြွတဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေ မတရားတာမကြိုက်အမှန်တရားမြတ်နိုးတဲ့အရွယ် လူစုလူဝေးနဲ့ ရှိနေချိန်(လူစုလူဝေးရဲ့သဘောအရ လူများရင် စိတ်ကြွတဲ့ သဘောရှိ) ဒီလို လူငယ်တွေက ပြည်သူ့အုံကြွမှုကို ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရ စတင်ကြတာ သီအိုရီအရ အမှန်ပါ၊ (မှတ်ချက်။ ။ လူ့သဘောအရ အသက်အရွယ်လိုက် အပြောင်းအလဲရှိသည်)။ ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကို စတင်နိုင်ဖို့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာက စတင်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလုပ်ဆောင်ချက်တွေကို ဘယ်သူတွေလုပ်ဆောင်ကြသလဲဆိုရင် မှန်မှန်ကန်ကန်ဝံခံရဲကြရင် (ဗကပ)တွေ မြုတ်နှံထားတဲ့ (ယူဂျီ)တွေက ဖေါ်ဆောင်တယ်ဆိုတာ ၀န်ခံရပါလိမ့်မယ်။
ဗကပသည် ဦးနေ၀င်း လုပ်မည့်ရွေးကောက်ပွဲကို သူတို့မပါဝင်ရ၍ ရွေးကောက်ပွဲသည် အတ
ုအယောင်ကြီး သာဖြစ်ကြောင်း စစ်မှန်သော ရွေးကောက်ပွဲ ရရန် ကြားဖြတ် အစိုးရဖွဲ့ပြီး ထိုအစိုးရက တရားမျှတသော ရွေးကောက်ပွဲကို ဆောင်ရွက်ပေးပြီး အနိုင်ရ ပါတီကိုလွှဲပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ကြားဖြတ်အစိုးရ ကို တောင်းဆိုရန် လူထုကို မြောက်ပင့်ပေး လေတော့သည်။
ဦးနေ၀င်းအနေနှင့် ကြားဖြတ် အစိုးရကို လက်ခံလျှင် သူကြိုးစင် တက်ရမည် ဖြစ်သဖြင့် လုံးဝ လက်မခံနိုင်ပါ။
ကြားဖြတ် အစိုးရရရန် ၀န်ကြီးဌာန အားလုံး အထွေထွေ သပိတ်မှောက်ရန် ဗကပသည် လူထုကြီးကို သွေးထိုး သောကြောင့် ၈၈၈၈ စတင်လေတော့သည်။
Dr Zaw Min biography.
The best communist party U.G Thet Khine biography.
Thanks,Ko Moe Tee.U put all my comments.This is Democracy.Thanks again.
တစ်ပြည်လုံး လူထုဆနခံယူပွဲကျင်းပရာမှာမဲပေးရာတွင် အဆင်ပြေမှု့၊ မဲပြားများ ထုတ်လုပ်ရေးပြည့်စုံမှု့ စသည်တို့ကို စီစဉ်ရန် သင့်တော် သည့်အချိန်လိုအပ်ပါသည်။
အကြမ်းဖျင်းပြောရရင် စက်တင်ဘာလကုန်အထိသာ သတ်မှတ်သင့်ပါသည်။ ဖြစ်နိုင်လျှင် အဲ့ဒီရက်ထက် စောပြီးကျင်းပ ပေးသင့်ပါသ
လမ်းစဉ်ပါတီ ဥက္ကဌကြီး ဦးနေ၀င်း
ဘာဘဲဖြစ်ဖြစ် နေ၀င်းအစိုးရပြုတ်ကျခဲ့လို့ သာ အခုလို အခြေအနေရောက်လာတာပါ... နောက်မို့ ဆိုရင် တန်းစီပြီး စားရတဲ့ ဘ၀က လွတ်မှာမဟုတ်ပါ.. ကိုမိုးသီးဇွန်ကိုအမြဲတမ်းလည်း လေးစားပါတယ်.. လက်ခံပါတယ်... ဆက်လက်ပြီး ပြည်သူအတွက် အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေဆက်လက် လုပ်စေချင်ပါတယ်.. ဗွီဒီယိုကိုကြည့်ပြီး ( မိသားစုတွေ ပြန်တွေ့ ကြတဲ့ မြင်ကွင်းကို မြင်ပြီး မျက်ရည်တောင် ၀ဲမိပါတယ်) ... ကွန်မြူနစ်ဝါဒကိုတော့ လုံးဝ မကြိုက်ပါ...
ဒါ ကြောင့် လူထုဆန္ဒ ထောက်ခံရေး အဖွဲ့ကို တခါထဲ ဖျက်သိမ်းပြီး အမြန်ဆုံး ရွေးကောက်ပွဲလုပ်ရန်ဆိုလာတယ်။
နောက်တော့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ၀န်းရံကြ၊ အင်အယ်လ်ဒီကို ၀န်းရံကြ ဆိုပြီး ဗကပ-တို့ တစခန်း ထလာ တော့တယ်။
Remove background song will gonna be perfect clip.So disturb for audience.